Thwebula Mova 1 – Vessoft
Mova – a isofthiwe ukuthuthukisa ulwazi ngolimi Ukraine. Isofthiwe uyakwazi ukuthi afundise, kumbe ngcono ulwazi isipelingi, bomcondvofana, phraseology, nangezindlela ezihlukahlukene, ladidako, njll Mova senziwa ngesimo umdlalo, lapho kumelwe ukhethe lengiyo impendulo inketho umbuzo owaphakanyiswa. Isofthiwe ubonisa incazelo yokuthi impendulo efanele bese unikeza amabhonasi virtual umsebenzisi. Mova futhi iqukethe isigaba ekhethekile, ukuze ngalo izibonelo entsha ye esipelingi kanye ukuphinyiselwa amazwi ezahlukene kunezelwa nsuku zonke.
A wezincwadi omkhulu wolwazi
Izivivinyo ne izincazelo
Amazwana on Mova:
Mova Ahlobene software:
Imidlalo Lo Simulator game ukuzingela ezihlukahlukene izilwane zasendle ezahlukene ezindaweni ezingavamile. Futhi in the game kukhona arsenal enkulu izikhali esiklanyelwe izitayela ezahlukene ukuzingela.
English, Українська, Deutsch, Русский... Twitch 4.14
Abadlali Media Umdlali popular ukudlala eziningi ifomethi in a high. Isofthiwe kuvula amathuba ebanzi oyifisayo ngesikhathi ukubukela video files.
English, Afrikaans, Українська, Français... 4shared Desktop 3.24
Amafayela Ithuluzi for the ukufinyelela kanye nokuphathwa idatha ye service 4shared. Isofthiwe ikuvumela ukuba uthole ukufinyelela ku-akhawunti yakho futhi ukudlala amafayela emidya.
English, Français, Deutsch, Русский... Bona software xaxa